Fizahan-tany any ivelany Journey-Assist - Fitsangatsanganana eny amin'ny habakabaka
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Fizahan-tany eny amin'ny habaka
hevitra fizahan-tany eny an-habakabaka tamin'ny voalohany tamin'ny taona 1967 no nanehoana azy voalohany fa tao anaty 2001g olona voalohany, sata fizahan-tany, mpandraharaha italiana Dennis Tito tamin'ny faha-61 taonany, nanao sidina valo andro voalohany tany amin'ny habakabaka tao amin'ny sambon-danitra Soyuz Rosiana. 128 vantany vao nanodidina ny tany izy, nandoa izany 20 tapitrisa dolara. Naharitra ny fanomanana an'io sidina io. 8 volana sy nampidirina fa tsy ny fahasalamana ara-batana ihany, fa koa ny fahaiza-manao fototra amin'ny fitantanana ny sambo.
Ankehitriny izao dia orinasa 4 no mirotsaka amin'ny fanatanterahana fitsangatsanganana eny amin'ny sehatra manokana, izay hoentintsika eto ambany.
Iray amin'ireo mpamatsy fanokafana ny habakabaka haingana indrindra. orinasa Space X niorina tamin'ny 2002 avy amin'i Ilon Mask. Nandritra ny tantarany dia nahavita bebe kokoa 100 ny asa fitoriana ho an'ny fandefasana satelita ara-barotra amin'ny orbit ny Tany sy ny fanaterana entana any amin'ny gara.
Mandeha miaraka amin'ny mpizahatany, ny orinasa dia mikasa ny hanomboka 2023herintaona manomboka amin'ny dia maharitra herinandro ka hatramin'ny volana. Anisan'ny sidina ireo dia azonao atao ny mahita ny lafiny avadika Ny volana, tsapao ny herin'ny zero ary jereo tanteraka ny kapila an'ny Tany.
Dingana manaraka, feno fitiavan-tena Elon Musk mahita sidina mankany Mars. Ankoatra izany, misy vondrona 100 olona. Ny sidina voalohany dia vinavinaina amin'ny 2024.
Adventures amin'ny habakabaka
Space Adventures - Orinasa Amerikanina miaraka amin'ny Rosiana "Roscosmos», Ny tolotra hitsangatsangana Ny volana. Ny marimarina kokoa dia manodidina ny volana, satria tsy tokony ho tonga ny volana.
Ao anatin'ny rafitr'ireto dia ireto dia azo atao ny miaina ny tsy fahampian'ny lanjany, ary amin'ny sarany dia azo atao ny manao spacewalk. Vao maraina, Space Adventures sy Roscosmos nikarakara fitsangatsanganana toby iraisampirenena (ISS).
Virjiny Galactic - Ny orinasa amerikana dia manolotra mpizahatany mpanamory mba hanao fitsidihan-dàlana Valan'aretina virtoaly Galactic. Ny sidina dia hitranga amin'ny haavon'ny fiakarana fotsiny 100km. Hisy ny fahafahana hahita ny Tany avy amin'ny habakabaka, ary koa ny hiaina gravity zero.
SpaceShip2- Unveils ao Mojave, CA
Ny faharetan'ny sidina eo ho eo adiny roa sy sasany. vidin'ny 250 arivo $... 900 ny tapakila efa namidy, ary hatreto dia miato ny varotra.
Blue Origin - Orinasa amerikana Jeffrey Bezos (mpanorina ny Amazon.com). Niforona tamin'ny 2000 izy io. ho an'ny fizahan-tany eny amin'ny habakabaka.
Tamin'ny taona 2019 dia niditra tao amin'ny lisitry ny orinasa nofidina NASA ho an'ny fampandrosoana sy ny famokarana spacecraft ho an'ny fizarana amin'ny volana. Amin'ity taona ity (2019), ny orinasa dia mikasa ny hivarotra tapakila ho an'ny sidina amin'ny habakabaka azo averina New Shepard natao ho an'ny sidina suborbital. Ao anatin'ny sidina dia mpandeha 6 no hiakatra amin'ny haavony 100km, ary ho afaka hahatsapa ny toetran'ny tsy fahampian'ny lanjany mandritra ny minitra maromaro, ary koa hahita ny drafitry ny Tany. Ny vidin'ny sidina toy izany dia 200-300 arivo $.
Ny hotely voalohany amin'ny habaka ivelany
Orinasa tanora Orion span Nanambara ny fikasany hanangana ny hotely habakabaka voalohany "Fiantsonana Aurora". Ary alefaso amin'ny orbit ambany tany. Ny vidiny 12 andro fitsaharana ao amin'ity hotely ity no andrasana $ 9,5 tapitrisa.
Ny vidiny dia misy ny fijanonana ao amin'ny hotely, programa fanomanana mandritra ny telo volana, ary koa famindrana mankany amin'ny hotely sy fiverenana.
Raha ny filazan'ny vinavina dia andrasana amin'ny farany ny fampidirana io toeram-piantsonan'ny toerana io. 2021g. sy ny vahiny voalohany Aurora Station, hanaiky 2022g.
Raha ho fanondroana: ny halavan'ny toby dia ho 13.3m. sakany 4.3m.
Hararaoty famandrihana trano fandraisam-bahiny afaka izao. Ny vidin'ny famandrihana total 80 $.
Mampanantena tsy hay hadinoina ny fiheverana 😉.